Myanmar: Perpetrators of the most serious international crimes will be held to account - Aliran
Home Myanmar Watch Myanmar: Perpetrators of the most serious international crimes will be held to...
Myanmar: Perpetrators of the most serious international crimes will be held to account
International justice hasavery long memory
Statement by Nicholas Koumjian, head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar, on the anniversary of the military’s seizure of power in Myanmar:
One year ago, the elected government of Myanmar was deposed by military authorities.
At that time, I explained that the issues surrounding this coup, its legality under the constitution and the effect on democracy in Myanmar were not within the mandate of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar.
This is because the coup itself did not qualify asa“serious international crime”,aterm defined in our terms of reference as including only genocide, war crimes and crimes against humanity.
However, I explained that, given the tragic history of the Myanmar military using violence against political opponents, the mechanism was concerned and would be closely following events. I explained that if it appeared that crimes against humanity or war crimes were being committed, the mechanism would fulfil our mandate to collect the evidence and build files that could facilitate criminal prosecutions of those persons responsible, in national, regional or international courts.
Tragically, reports received over the last year suggest that well overathousand individuals have been killed in circumstances that may qualify as crimes against humanity or war crimes. The security forces have detained thousands of civilians in circumstances that include credible allegations of arbitrary detention, torture, sexual violence and even killings while in detention.
The mechanism is working diligently to substantiate and document the facts underlying these reports to establish whether these crimes were committed and if so, who is criminally responsible, and to prepare files that could facilitate prosecutions. The mechanism has been able to gatheragreat deal of relevant material concerning these events and we are adding information and evidence to our files almost daily.
READ MORE: Foreign ambassadors holding shameful meetings with Min Aung Hlaing are on the wrong side of history
The mechanism is very grateful to the many thousands of persons and organisations that have shared evidence relevant to our examination of serious international crimes in Myanmar. We are committed to doing all we can to assure the safety and security of those with whom we interact and will make every effort to build cases so that their brave contributions to justice in Myanmar are not in vain.
Governments all over the world have been unanimous in calling foracessation of the violence – by all parties – now being inflicted on the people of Myanmar. Asean, in particular, has made the immediate cessation of violence, the very first point of its five-point consensus. The work of the mechanism, by collecting evidence of the very worst international crimes, complements these efforts to end the violence.
The mechanism is closely watching events and working to fulfill its mandate. Those who are considering committing crimes should be aware that serious international crimes have no statute of limitations. International justice hasavery long memory and one day the perpetrators of the most serious international crimes in Myanmar will be held to account. – IIMM/UN
READ MORE: Planned executions announced by the illegal military junta would amount to summary executions
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှု တစ်နှစ်ပြည့်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တယားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နီကိုလပ်ကိုမီဂျီ၏ ကြေညာချက်
၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုရဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှု ခံထားရတဲ့ အစိုးရကို စစ်အာဏာရှင်တစ်စုက ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိအချိန်က အာဏာသိမ်းမှုနနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်များ၊ အာဏာသိမ်းမှုဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင်မှု ရှိ မရှိ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးပေါ် သက်ရောက်မှု စတဲ့ အချက်တွေဟာ ယန္တယားရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အောက်မှာ မရှိကြောင်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ အဲဒီလို ပြောရသလဲဆိုတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုတည်းနဲ့က လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်ပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ အပါအဝင် ‘ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု’ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြစ်မှု မမြောက်လို့ပါ။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က နိုင်ငံ‌ရေးအရ သူ့ကိုဆန့်ကျင်သူတွေကို အကြမ်ဖက်တတ်တဲ့ သမိုင်းရှိတာမို့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကို ယန္တရားက စိုးရိမ်ပြီး အခြေအနေတွေကို အနီးကပ် လေ့လာ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လူသားမျိုးနွယ်ပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ပုံရတယ်လို့ ယူဆပါက ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် ယန္တယားအဖွဲ့အား ပေးအပ်ထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အညီ ဆီလျော်မှုရှိတဲ့ အထောက်အထားများကို စနစ်တကျ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး အမှုတွဲများတည် ဆောက်သွားပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံတကာတရားရုံးများက တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာပါက ဒီအမှုတွဲတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားခြင်းဖြင့် ယန္တရားဟာ သူ့ကို အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်ပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ပုံစံမျိုးမှာ လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရတာကို တစ်နှစ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေအရ သိရပါတယ်။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အရပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး ဖမ်းဆီးထားစဥ်မှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထားစဥ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်စော်ကားမှုများနှင့် သတ်ဖြတ်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ စွဲဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ယန္တရားဟာ အဆိုပါ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့မှု ရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရာ အထက်ဖော်ပြပါ အစီရင်ခံစာတွေက ဖော်ပြထားချက်တွေကို အချက်အလက် အစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုနိုင်ရန် အားသွန်ခွန်စိုက်လေ့လာပြီး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုရှိပါက မည်သူ့မှာ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ တာဝန်ရှိသလဲ စသဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရာ၊ ‌နောက်ပြီး တရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ့် အမှုတွဲ တည်ဆောက်မှုတွေကို ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုနဲ့ ဆီလျော်မှုရှိတဲ့ အထောက်အထားတွေကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ မျှဝေပေးတဲ့ထောင်သောင်းချီတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ယန္တရားက အင်မတန် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အဆက်အဆံလုပ်သူများရဲ့ လုံခြုံရေး၊ အန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ သဲထဲရေသွန် မဖြစ်ရအောင် အမှုတွဲများ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမှာပါ။
ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းဟာ ကြီးလေးသောစိန်ခေါ်မှုကြီးပါ။ အားကောင်းတဲ့ အမှုတွဲတွေကို တည်ဆောက်မှုဟာ အချိန်ကြာတတ်ပြီး အရင်းအမြစ် အတော်အတန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းဗျူဟာနှင့် ဖန်တီးမှုတွေကို အသုံးချပြီး ယန္တယားအဖွဲ့က သက်သေ အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်စုဆောင်း သို့မှသာ အားကောင်းသော အမှုတွဲများ တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ထိုမှတဆင့် နိုင်ငံတွင်း၊ နိုင်ငံတကာတရားရုံးများ၏ တရားစီရင်ရေး လုပ်ငန်းစဥ်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် မျက်မြင်သက်သေနှင့် အထောက်အထားများ ရှိနေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကလည်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းစဥ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတွေရဲ့ ကူညီလုပ်ဆောင်မှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိသကဲ့သို့ ယန္တရားရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆက်လက် ဖြည့်ဆည်းရာမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာဖို့ကိုလည်း ယန္တယားအဖွဲ့က မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ် အင်အားစုပေါင်းစုံရဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှု အဆုံးသတ်သွားရေးကို နိုင်ငံတကာအစိုးရအားလုံးက တညီတညာတည်း တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း “အာဆီယံ” ရဲ့ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများအား ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုဟာ အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ချက်ထဲမှာ ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားများ စုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ယန္တယားရဲ့ လုပ်ငန်းများဟာ အကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ဖို့ အဆိုပါ အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထပ်ဆင့် အားဖြည့်ရာ ရောက်ပါတယ်။
မြန်မာယန္တယားအဖွဲ့ဟာ အဖြစ်အပျက်များအား မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကာ ပေးအပ်ထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင် အတွင်းကနေ အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြာင့် ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများအနေနှင့် ထိုအမှုများတွင် အချိန်ကန့်သတ်ချက် ဥပဒေမရှိကြောင်းကို သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမှုဟာ အချိန် ဘယ်လောက်ကြာကြာ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားမယ့်အရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အဆိုးရွားဆုး နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မုချဧကန် တရားရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။